पूर्व सांसद अनिता देवकोटाको घरमा... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
पूर्व सांसद अनिता देवकोटाको घरमा शंकास्पद बस्तु!
नेपाली काँग्रेसकी नेतृ अनिता देवकोटाको घोराहा बुधबार विहान फेला परेको बस्तु बम नभएको पुष्टि भएको छ।
पूर्व सांसद देवकोटाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित घरमा शंकास्पद बस्तु फेला परेपछि नेपाली सेना विहानै त्यहाँ पुगेको थियो।
नेपाली सेनाको अनुसन्धानवाट त्यो बस्तु कपडाको पोको भएको पुष्टि भएको दाङकी प्रहरी प्रमुख एसपी दुर्गा सिंहले सेतोपाटीलाई बताइन । ‘ संकास्पद कालो पोलिथिनको झोलामा ‘ट्रयाकसुट’ भरेर आतंक सृजना खोजिएको रहेछ ।
अनुसन्धान बाट त्यो बम नभएको पुष्टि भयो ।’ एसपी सिंहले भनिन् । उनले सिसी क्यामेराको फुटेजमा एकजना बुढो जस्तो देखिने बस्तुले उक्त बस्तु त्यहाँ लगेर छोेडेको देखिन आएको हुँदा ति व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धान र खोजि भइरहेको जानकारी दिइन्।
निर्वाचनको मुखैमा आएर भ्रम र आतंक सृजना गर्ने तत्वहरुले यो सबै गरेको हुन सक्ने भन्दै उनले विचलित नहुन र ढुक्क भएर विहीवारको मतदानमा सहभागि हुन आम मतदातालाई आग्रह समेत गरिन । ‘सुरक्षाको अति नै राम्रो प्रवन्ध गरिएको छ । मतदाताको घरदेखि मतदान स्थलसम्मको सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाएको भन्दै मतदानमा सहभागि भएर राष्ट्रिय अभिभारा पुरागर्न उनले आम मतदातालाई आग्रह समेत गरेकी छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४, ०९:००:०५